“M Hụrụ, ma Aghọtaghị M” | Akụkọ Ndụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Mexican Sign Language Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Akụkọ Olivier Hamel kọrọ
A mụrụ m n’afọ 1973. Ma mgbe m dị afọ abụọ, ọ dị ihe mere otu ụbọchị nke mere ka mama m chewe na ọ ga-abụrịrị na m nwere nsogbu. Ka mama m ku m n’aka, otu ihe dị arọ dapụnahụrụ otu enyi ya. Ihe ahụ dapụnahụrụ ya mere oké ụzụ. Mama m chọpụtara na mụ akụjaghị. Mgbe m dị afọ atọ, ekwuwebedịghị m okwu. Ọ bụ mgbe ahụ ka ndị dọkịta gwara ndị ezinụlọ anyị otu ihe wụrụ ha akpata oyi n’ahụ́. Ha kwuru na m bụ onye ogbi.
Mgbe m ka dị obere, papa m na mama m gbara alụkwaghịm, mama m azụwazie mụ na ụmụnne m ndị tọrọ m. Ụmụnne m ahụ dị atọ, ụmụ nwoke abụọ na otu nwaanyị. Na Frans n’oge ahụ, a naghị akụzichara ndị ogbi ihe otú e si akụziri ha taa. N’oge ahụ, otú e si akụziri ha ihe mgbe ụfọdụ na-eme ka ha tagbuo onwe ha n’ahụhụ. Ma kemgbe m dị obere, e nwere ihe ọma meere m nke na-emereghị ọtụtụ ndị ogbi ibe m. Ka m kọọ ihe ọ bụ.
Mgbe m dị ihe dị ka afọ ise
N’oge ahụ, ọtụtụ ndị nkụzi na-amanye ụmụaka ndị dara ogbi ka ha na-ekwu okwu. Ha na-amanyekwa ha ka ha na-ele onye nkụzi anya n’ọnụ mgbe onye nkụzi na-ekwu okwu ka ha nwee ike ịghọta ihe ọ na-ekwu. N’ebe anyị bi na Frans, e nyedịrị iwu ka a ghara iji asụsụ ndị ogbi na-akụziri ndị ogbi ihe n’ụlọ akwụkwọ. A na-ekela ụfọdụ ụmụaka ndị ogbi aka n’azụ n’oge a na-akụziri ha ihe na klas.
Mgbe m na-eto, otu ọkachamara nke na-akụziri ndị ogbi otú e si ekwu okwu na-akụziri m ihe ọtụtụ awa n’izu ọ bụla. Ọ na-ejide m aka n’agba ma ọ bụ n’isi ma manye m ka m na-ekwughachi ihe m na-anaghị anụ. Mụ na ụmụaka ndị ọzọ anaghị ekwurịta okwu. Atagburu m onwe m n’ahụhụ n’oge ahụ.
Mgbe m dị afọ isii, a kpọgara m n’ụlọ akwụkwọ ndị ogbi. Mụ na ndị ogbi ibe m bi ebi n’ebe ahụ. Ihe a bụ nke mbụ m na-ahụ ụmụaka ndị ogbi ndị ọzọ. N’ụlọ akwụkwọ a, ndị nkụzi anaghịkwa ekwe ka anyị na-asụ asụsụ ndị ogbi. O nwehaala otú anyị si megharịa aka ma ọ bụ ihu, ndị nkụzi na-akụ anyị ihe ma ọ bụ ha efopụ ntutu isi anyị. Ma anyị na-eji aka agwa ibe anyị okwu na nzuzo. Otú anyị si eme ya bụ na anyị na-echepụta otú anyị ga-esi na-agwa ibe anyị okwu ndị ọzọ aghara ịma ihe anyị na-ekwu. Ọ bụ otú a ka mụ na ụmụaka ndị ọzọ si malite ịkparịta ụka. Nke a mere ka m nwee obi ụtọ ruo afọ anọ.
Ma mgbe m dị afọ iri, a kpọgara m n’ụlọ akwụkwọ praịmarị. Ụlọ akwụkwọ a bụ nke ụmụaka ndị na-anụ ihe. Nke a gbawara m obi! Echere m na ụmụaka ndị ogbi ndị ọzọ anwụchaala, na ọ bụzi naanị m fọrọ n’ụwa. Ndị ezinụlọ anyị ekweghị amụ asụsụ ndị ogbi, ha ekweghịkwa ka mụ na ụmụaka ndị ogbi na-akpa n’ihi na ndị dọkịta gwara ha na ọ bụrụ na ha amụọ asụsụ ndị ogbi ma ọ bụ kwe ka mụ na ụmụaka ndị ogbi na-akpa, ọ ga-eme ka m ghara ịmụta ikwu okwu. M ka na-echeta otu ụbọchị anyị gara n’ọfịs dọkịta na-akụziri ụmụaka ndị ogbi otú e si ekwu okwu. Ahụrụ m otu akwụkwọ ndị ogbi n’elu tebụl ya. Mgbe m hụrụ ihe e sere n’ihu ya, m tụrụ akwụkwọ ahụ aka ma kwuo, sị, “M chọrọ akwụkwọ a!” Dọkịta ahụ zoro akwụkwọ ahụ ozugbo. *
Mama m gbalịrị ịkụziri mụ na ụmụnne m Baịbụl. Ọ na-akpọ anyị aga ọmụmụ ihe n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova aha ya bụ Merignak. Ọgbakọ a dị nso n’obodo Bọdoo. Ebe m ka bụ nwata, anaghị m aghọtacha ihe a na-amụ n’ọmụmụ ihe. Ma, e nwere ndị na-anọ m n’akụkụ ma jiri akwụkwọ na-edere m ihe a na-amụ. Otú ha si hụ m n’anya na-emetụ m n’obi. Mama m na-amụrụ m Baịbụl n’ụlọ, ma anaghị m aghọtacha ihe ọ na-akụziri m. Ọ dị m otú ahụ ọ dị Daniel onye amụma. Mgbe mmụọ ozi gwachara Daniel ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu, Daniel sịrị: “Mụ onwe m nụrụ ma aghọtaghị m.” (Daniel 12:8) Ma nke m bụ na “Mụ onwe m hụrụ, ma aghọtaghị m.”
N’agbanyeghị nke ahụ, eji m nwayọọ nwayọọ mụta ihe ụfọdụ Baịbụl na-akụzi. Ejighị m ihe ọ bụla m mụtara egwuri egwu, m na-agbalịkwa ime ya eme. Otú ọzọ m si mụta ihe bụ na m na-eleru àgwà ndị ọzọ na-akpa anya. Dị ka ihe atụ, Baịbụl gwara anyị ka anyị na-enwe ndidi. (Jems 5:7, 8) Ma, aghọtaghị m ihe inwe ndidi pụtara. Ma, ka m na-ahụ otú Ndị Kraịst ibe m si enwe ndidi, m bịaziri ghọta ihe ọ pụtara. N’eziokwu, ọgbakọ Ndịàmà Jehova nyeere m ezigbo aka.
MGBE IHE NDỊ M NA-ATỤGHỊ ANYA HA MERE
Stéphane nyeere m aka ịghọta Baịbụl
Otu ụbọchị mgbe m ka na-eto eto, ahụrụ m ụfọdụ ndị na-eto eto bụ́ ndị ogbi ka ha nọ n’okporo ụzọ jiri asụsụ ndị ogbi na-ekwurịta okwu. M na-ezoro ezoro pụọ ka mụ na ha na-akpa. Ọ bụ otú ahụ ka m si malite ịmụ asụsụ ndị ogbi nke Frans. M nọkwa na-aga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova. Mgbe ọ bụla m gara ọmụmụ ihe ahụ, otu Onyeàmà Jehova aha ya bụ Stéphane na-enyere m ezigbo aka. O mere ihe niile o nwere ike ime ka mụ na ya na-akparịta ụka. Mụ na ya bịara bụrụ ezigbo enyi. Ma, ihe m na-atụghị anya ya meziri m. Ndị ọchịchị tụrụ Stéphane mkpọrọ n’ihi na ọ jụrụ ịbụ onye agha. Ihe a merenụ gbawara m obi! Ebe ọ bụ na Stéphane anọghịzi, ike ịga ọmụmụ ihe gwụrụ m, mụ ana-aga mgbe masịrị m.
Mgbe ọnwa iri na otu gachara, Stéphane si n’ụlọ mkpọrọ lọta. Ọ tụrụ m n’anya ịhụ ka Stéphane jizi asụsụ ndị ogbi na-akụziri m ihe. Oleezi otú o si mụta asụsụ a? Ọ mụtara ya n’oge ahụ ọ nọ n’ụlọ mkpọrọ. M hụrụ otú o si efegharị aka na otú o si eme ihu ma ọ gwawa m okwu, obi atọkwuo m ụtọ, mụ amara na mụ alaferela.
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI BỊARA DOO M ANYA
Stéphane malitere ịmụrụ m Baịbụl. Ọ bụ mgbe ahụ ka ihe ndị a kụziiri m n’oge gara aga bidoro ido m anya. Mgbe m dị obere, ọ na-amasị m ikiri ọmarịcha foto ndị e sere n’akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl. M na-eleru ha anya ka m ghọta ihe mere e ji see ha, ka m ghara ichefu ha. Ana m anụ banyere Ebreham, “mkpụrụ” ya, nakwa “oké ìgwè mmadụ” ahụ. Ma ọ bụ mgbe e ji asụsụ ndị ogbi kụziere m ihe ha pụtara ka m bịara ghọta ha nke ọma. (Jenesis 22:15-18; Mkpughe 7:9) O doro anya na ọ bụ asụsụ ndị ogbi bụ asụsụ na-eru m n’obi.
Ugbu a m ghọtawara ihe a na-amụ n’ọmụmụ ihe, ihe a na-akụzi na ya bịara na-eru m n’obi, mụ ana-achọ ka m mụtakwuo ihe. Stéphane nyeere m aka ịmụtakwu Baịbụl. N’afọ 1992, enyefere m Jehova Chineke onwe m, e meekwa m baptizim. N’agbanyeghị na mụ emewala nke ọma, ihere ka na-eme m, mụ na ndị ọzọ ikwurịta okwu na-esikwara m ike, n’ihi na nke ahụ amabeghị m ahụ́.
MBỌ M GBARA KA M KWỤSỊ IME IHERE
Mụ na ụfọdụ ndị ogbi bịaziri soro otu ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị na Pesak na-amụ ihe. Pesak dị n’obodo Bọdoo. Nke ahụ nyeere m ezigbo aka, meekwa ka m na-efe Chineke nke ọma. N’agbanyeghị na mụ na ndị ọzọ ikwu okwu na-esiri m ike, ndị enyi m ndị nke na-anụ ihe na-agba mbọ ka ha hụ na m ghọtara ihe niile a na-ekwu n’ọmụmụ ihe. Otu di na nwunye aha ha bụ Gilles na Elodie gbalịrị ka mụ na ha na-ekwurịta okwu. Ha na-akpọkarị m ka m bịa rie ihe ma ọ bụ ṅụọ kọfị n’ụlọ ha ma anyị gbasaa ọmụmụ ihe. Nke a mere ka mụ na ha dịrị na mma. Obi na-atọ m ụtọ na mụ na ndị na-efe Chineke na-akpa.
Ebe m ji asụsụ ndị ogbi nke Frans na-akụzi ihe n’ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova
Ọ bụ n’ọgbakọ anyị a ka m hụrụ otu ọmarịcha nwa agbọghọ aha ya bụ Vanessa. Ihe banyere ndị ọzọ na-emetụ ya n’obi. Ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị n’ebe ọ nọ. Ọ dịtụghị mgbe o chere na ogbi m dara ga-eme ka mụ na ya ghara ịna-ekwurịta okwu, kama o weere ya na ọ ga-eme ka ya mụta asụsụ ndị ogbi. Vanessa bịara rie m obi, anyị lụkwara n’afọ 2005. Ọ bụ eziokwu na ọ na-esitụrụ m ike ịgwa ndị ọzọ okwu, Vanessa enyerela m aka ka m kwụsị ime ihere. Obi dị m ụtọ na ọ na-enyere m aka ka m rụọ ọrụ ndị dịịrị m.
IHE ỌMA ỌZỌ JEHOVA MEERE M
N’afọ ahụ anyị lụrụ, ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova nke dị na Luvie, ná mba Frans, kpọrọ m ka m bịa otu ọnwa ka ha kụziere m otú e si asụgharị asụsụ ndị ogbi. Ọ dịbeghị oké anya ụlọ ọrụ a malitere ịsụgharị akwụkwọ anyị ka ha dịrị na diiviidi n’asụsụ ndị ogbi nke Frans. Ma ebe ọ bụ na ha nwere ọtụtụ ọrụ ha ga-arụ, ha chọkwuru ndị ga-enyere ha aka.
Nwunye m Vanessa na-enyere m ezigbo aka
Mụ na nwunye m weere ya na ọkpụkpọ a kpọrọ m bịa rụọ ọrụ n’ụlọ ọrụ a bụ ihe ọma Jehova Chineke meere m. Ma, ụjọ tụkwara anyị. Oleekwanụ ihe ga-eme ndị ogbi ahụ anyị na ha nọ ma anyị pụọ? Oleekwanụ ihe anyị ga-eme ụlọ anyị? Vanessa ọ̀ ga-enwetali ọrụ n’obodo ahụ? Ọ tụrụ anyị n’anya na Jehova gbooro anyị mkpa ndị ahụ. O doro m anya na Jehova hụrụ anyị na ndị ogbi n’anya.
ỤMỤNNA ANYỊ DỊ N’OTU NA-ENYERE M AKA
Ebe ọ bụ na esorola m sụgharịa akwụkwọ n’asụsụ ndị ogbi, amarala m mbọ niile a na-agba ime ka ndị ogbi mata Chineke. Obi na-atọkwa m ụtọ ịhụ na ọtụtụ ndị mụ na ha so na-arụ ọrụ na-agbalị ka mụ na ha na-ekwurịta okwu. Ihe ole na ole ha mụtara n’asụsụ ndị ogbi na otú ha si eji ihe ndị ahụ ha mụtara na-agwa m okwu na-eme m obi ụtọ. Nke ahụ na-eme ka m ghara ile onwe m anya ka onye a jụrụ ajụ. Otú a ha si hụ m n’anya gosiri na Ndịàmà Jehova dị n’otu.—Abụ Ọma 133:1.
Ebe m na-arụ ọrụ ná Ngalaba Nsụgharị n’ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova
Ana m ekele Jehova na o jirila ọgbakọ Ndịàmà Jehova nyere m ezigbo aka. O nweghị mgbe m na-achọ onye ga-enyere m aka achọ. Obi dịkwa m ụtọ na enyerela m ndị ogbi ibe m aka ịmata Jehova, nakwa ka ha na ya dịrị ná mma. Ana m atụsi anya ike ịhụ mgbe a na-agaghịkwa enwe ihe ga-eme ka mmadụ na ibe ya ghara ịna-ekwurịta okwu nke ọma, nakwa mgbe mmadụ niile ga na-asụ “asụsụ dị ọcha,” nke bụ́ eziokwu banyere Jehova Chineke na uche ya. N’oge ahụ, mmadụ niile ga na-asụ ya ka otu ezinụlọ.—Zefanaya 3:9.
^ para. 9 Ọ bụ n’afọ 1991 ka gọọmenti mba Frans nyere ikike ka e jiri asụsụ ndị ogbi na-akụziri ụmụaka ndị ogbi ihe n’ụlọ akwụkwọ.
Akụkọ Ndụ: “M Hụrụ, ma Aghọtaghị M”